Home » My Dear Diary » သို့ …. (၁၄-၁၁-၂၀၁၅)
ကိုယ်လဲ ရှေ့ဆုံး က ရှိနေတော့မှာ။
တကယ်တော့ အပြစ်ရှာခံရတာ ကောင်းပါတယ်။
မခိုးတဲ့ အစိုးရ အုပ်ချုပ်နေရင် အခြေခံအဆင့်တော်တော်များများ
မှာ တစထက် တစ နည်းနည်းခြင်းကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်
သူကြီးဆီ ပို့ပေးလိုက်ပါ့မယ်။ Thanks.
အခုအရွေးခံရတဲ့ NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေ အနေနဲ့ ပါတီအလံကြောင့် အနိုင်ရတယ်ဆိုတာ မမေ့စေချင်ဘူးလို့ ဒေါ်စုက ကြိုတင်ပြောခဲ့တယ်။
ပွဲက ယခုမှ စသည်မို့ ကြည့်လျအူးတော့မှာပဲ.. ဒီချုပ် ဘယ်လောက် စွမ်းသရဲ ဆိုဒါ။ ဒါနဲ့စပ်လို့ ဒီဗွီဘီ ကမေးတဲ့ ပညာတတ်တွေကို နေလျှာပေးမှလား မေးခွန်းကို ဘွားဒေါ်က ဦးခင်မောင်စိုးလျေအစချီပီး ပညာတတ်ဆိုဒါ ဘာကိုဆိုသလဲ.. …… …. ဖြေသွားလယ်…။ လာမည့် နိုင်ငံလျေး အခင်းအကျင်းဗေါ် မူတည်လို့ တက်ကနိုခရက် နဲ့ ဒူပေတာပေခံ နိုင်ငံရေးသမား ဘယ်သင်း ဦးစားပေးမည်နည်း ဘွားဒေါ် ရွေးလျပါတော့မည်။ ဒန် တန့် တန်…..
တိုင်းပြည် ကို စေတနာမထား တဲ့ ပညာရှင် ဒေါက်တာ ဘွဲ့ရ တွေ ထက် တိုင်းပြည် ကို စေတနာ မရှိ တဲ့ ပညာမတတ်သူ ကို ဝိုင်းပံ့ပိုး ပြီး အလုပ် ကို စေခိုင်းချင်ပါတယ်။
တိုင်းပြည် ပိုက်ပိုက်ရှိ.. ချမ်းသာဖို့ပဲလိုတယ်..။
NLD က နိုင်ငံရှေ့ဆက်မယ့် မူဝါဒလမ်းစဉ်အချက် ၅ ချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
စုစည်းလုပ်ကိုင်မှု အားနည်းနေသော အစိုးရဌာန ယန္တယားများကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသွားပါမည်။
(၃) စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဏ ဖွံ့ဖြိုးအောင် နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမည့် ကုမ္ပဏီများကိုဖိတ်ခေါ်ပြီး၊ လယ်သမားများကို ချေးငွေများ၊ လယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ဖေါ်ဆောင်ပေးသွားပါမည်။
ဖြုတ်မယ့်ဝန်ကြီးဌာနတွေထဲ… သာသနာရေး၊ ပြန်ကြားရေး။ ထိပ်ဆုံးစာရင်းတို့စေချင်တယ်..။
ဒါက ဒီပေ့(ချ) က ယူလာတာ။
လူ သန်း ၃၀၀ ကျော် ယူအက်စ်က… အောက်ကစာရင်းအတိုင်းဆို ၁၅ခုပဲရှိတယ်။